Ihowuliseyili Iphepha leengxowa zePhepha le-Eco-friendly Natural Colour Make Up cosmetic Organiser mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Iphepha leNdiza yengxowa ye-Eco-enobubele yeNdalo yeNdalo Yenza isiCwangcisi seCosmetic
Izinto: Iphepha leendiza Ubunzima: 41g
Ubukhulu: L51 * W9.5 * H10cm Ukuvalwa: Uziphu
Indawo yokuQala: I-GUA, CN Izibuko: Shenzhen
Kwizinto ezilukiweyo zephepha, sinezinto ezimbini eziphambili zephepha lezinto eziphathekayo kunye neraffia. Ezi zinto zimbini zihlala zisetyenziswa kumashishini amaninzi.
FRom ukubonakala, ingca yeraffia kunye nephepha lendiza kubonakala ngathi akukho kwahlukileyo, kodwa bekumbono kuphela, ingca eraffia kwisiphatho igudile kakhulu, ngamanye amaxesha ivakalelwa ngathi luhlobo lweplastiki, kunye nengca yephepha kukho kuphela Ukuchukumisa okukrwada, umququ wephepha yinto ebanzi kakhulu enexabiso eliphantsi, ngelixa ingca ye-raffia inokuqina okungcono kunengca yephepha, ingesabi amanzi, yomelele ngakumbi.
Xa umququ wephepha okanye imveliso yeraffia iphela ebomini, banokwahlulwa ngaphandle kwinkqubo yokulahla inkunkuma emva koko babuyiselwe kumatshini wokuguba ukuze buphuzwe bujikwe ibe zezinye iimveliso zephepha.
Le ngxowa yendalo iphela yendalo kwaye iyahlangabezana “nemeko-bume yendalo esingqongileyo.” Olu ludibaniso lwamaqhina ngumqhaphu obhityileyo ophinda usetyenziswe kwaye ukhusela iimpahla kuwo.
Okulandelayo: I-Eco-friendly cosmetic Bag Isilungisi seZiphu kunye neTassel Puller